Iimpawu, indlela yokuphila kunye nokutya kwe-tiger shark | Ngeentlanzi
Ngaphakathi kweentlobo zookrebe Ingwe ekrebe yenye yezona zidumileyo. Olunye lolona hlobo lufundwayo kwaye lolona lwazi luninzi lukhona kunye nolukhulu Ukrebe omhlophe. Kuninzi okwaziwayo malunga nazo zonke iimpawu zayo, indlela yokuziphatha kunye nendlela yokuphila.
Kule nqaku siza kuyifunda ngokunzulu ukuze sikwazi ukukunika ulwazi oluninzi malunga nalo.
3 Indawo yokuhlala nokondla i-tiger shark
Xa sithetha nge-tiger shark, sibhekisa kolu didi lolukahlobo lweGaleocerdo. Kwakhona kwaziwa ngegama eliqhelekileyo le-tiger yolwandle. Usapho lwayo yiCarcharhinidae. Kucacile ukuba igama ngenxa yokufana kwayo nengwe. Kungenxa yokuba xa bebancinci ngeminyaka, umva uhlala ugqunywe yimigca efana naleyo yeengwe.
Le migca iyaphela ide inyamalale xa ikhula kwaye ibe ngabantu abadala. I-tiger shark sisilwanyana esihlasela irhamncwa. Indima yayo ekulinganiseni indawo ehlala kuyo kubaluleke kakhulu. Ngombulelo kuye, uninzi lwamaxhoba akhe alunakudla ngokutya zonke izityalo eziselwandle. Oku kuthetha ukuba uhlobo lungahlala kwindawo eseleyo phakathi kwentsimi entsha evelisiweyo kunye nezo zityiwayo ziziindidi ezidla utyani. Ukuba ibingezizo ezo krebe, ngekukho ubuninzi beentlobo zokutya ingca kwaye beziya kuthi shwaka ekugqibeleni.
Ukongeza kuyo yonke into esiyithiye igama, ithathwa njengenye yookrebe ngobukhulu obukhulu. Kule thelekisa asikhupheli whale shark, kunjalo.
Sifumana isilwanyana esinobungakanani obuphakathi kwe-3 kunye ne-4,5 yeemitha ubude. Eminye imizekelo Banokulinganisa ukuya kuthi ga kwi-7 yeemitha kunye nobunzima ukuya kwi-600 kilos. Njengoko ubona, sisilwanyana esikhulu ngokwaneleyo kwaye yenye yezona zikhulu ezikhoyo. Umbala wayo umhlophe esiswini kwaye luhlaza okwesibhakabhaka okanye luhlaza ngasemva. Le mibala yenza ukuba kube lula ukuba ikwazi ukuzimela kwixhoba layo kwaye iyothuse. Kuyanceda ukunqanda ukubanjwa zezinye izilwanyana ezizingelayo.
Emqolo wayo kukho imigca eyenza ibonakale ngathi yizingwe xa zisencinci. Emva kwexesha, njengoko zikhula, zilahlekile. Imihlathi yawo yomelele kwaye iyakwazi ukutyumza iqokobhe elilukhuni lofudo. Amazinyo abukhali kakhulu kwaye asasazwa ngendlela eyenza ukuba kube lula kakhulu ukuhlasela. Ubume bentloko buthe tyaba. Iphantse yabonakala ngathi luxande.
Ngokubona kunye nephunga, inesakhono esiphakamileyo sokulazi ixhoba kwaye ulinukise ukusuka kwiikhilomitha. Oku kubenza babe ngamarhamncwa okwenene oyikwa ziindidi ezininzi. Nangona kunjalo, njengoko besesitshilo ngaphambili, banomsebenzi obaluleke kakhulu kulungelelwaniso lwendalo apho bakhula khona.
Isakhono sokutshintsha amazinyo sigqibelele ukunciphisa iingxaki zeenyembezi kunye namazinyo aphukileyo. Njengabanye ookrebe abaninzi, bayakwazi ukubona intsimi yombane ngenxa yomzimba woluvo abanalo. Ukuziphatha kwesi silwanyana yedwa. Akunakufane umbone esenza amaqela. Ngokwesiqhelo, Iminyaka abayiphilayo ayidluli kwiminyaka engama-50.
Indawo yokuhlala nokondla i-tiger shark
I-Tiger shark zihlala zihlala emanzini kwihlabathi liphela. Nangona bekwazi ukukhula nakweyiphi na imeko, Bakhetha ukuhlala kwimimandla eshushu netropical ngenxa yobushushu bamanzi.
Iindawo apho zininzi khona ziiCaribbean, iGulf of Mexico, iBahamas, iCanary Islands, iMeditera, iJapan, i-Indonesia, iAustralia, iNew Zealand, iHawaii, iHaiti kunye neGalapago Islands. Oko kusenza sibone ukuba inabantu abaninzi ngokubanzi.
Ngokuphathelele ukutya kwakhe, akanyanzelisi xa kufikwa kumba wokutya. Ewe, sisidalwa esidla inyama. Inokutya kwizilwanyana ezininzi zolwandle. Abantu abayonxalenye yokutya kwabo, ngoko ke akukho bungozi ngayo.
Phakathi kokutya ahlala esiya rhoqo sifumana iintlanzi, i-squid, ii-crustaceans, i-octopus, ii-lobster, imitha kunye neentaka. Le yokugqibela uyibamba ngokungakhathali kwicala lakhe xa bekufuphi nomphezulu. Ukuba iimeko ziyayifuna, ziyakwazi ukutya ezinye ookrebe. Into abadla ngokuyitya kwaye inomdla ngokwenene ukuyibona ziifudo zaselwandle. Nangona bezikhusela ngeqokobhe, ayisiyongxaki yamazinyo engwe.
Into eyothusayo ibalulekile ukulungiselela uhlaselo lwakho. Kungenxa yale nto banempumelelo yokuzingela. Ngokufihla kwabo bayazimela ukuhlasela ixhoba. Ihlala izingela ebusuku, xa impumelelo yayo yokuzingela inkulu. Ukuba ixhoba liyaphawula ngaphambi kokuba lithinjwe, linokuba nakho ukubaleka ukuba liyakwazi ukutsiba kwiindawo ezinciphileyo. Masingakulibali ukuba ubukhulu kunye nobunzima be-tiger shark bungenza ukuba ibe krwada ngakumbi ekusukeleni.
Esi silwanyana sivelisa ngendlela ye-ovoviviparous. Oko kukuthi, banamantshontsho abo ngaphakathi kodwa asongelwe ngeqanda. Amaqanda aqanduselwa ngaphakathi ukulungiselela indawo yomntu omtsha. Ngaphambi kokudibana, kufuneka bafikelele ekuvuthweni ngokwesondo. Inkunzi iyakwazi ukufikelela kuyo ineminyaka esixhenxe ubudala ngelixa iimazi kufuneka zilinde de zibe li-7.
Eyona nto idla ngokuba nomdla kuye wonke umntu ofunda ngezi krebe kukuba ukumitha kwenzeka kanye kwiminyaka emithathu. Nangona kunjalo, umntu ngamnye obhinqileyo uyakwazi ukuba phakathi kwabangama-30 ukuya kuma-50 abaselula. Abancinci banokuhlala emzimbeni kamama kangangeenyanga ezili-16. Eli nqanaba lokuzala liphezulu kakhulu xa ucinga ukuba zithathwa njengesixhobo sokugqibela kwikhonkco lokutya. Kuxhomekeke kukutya kunye neemeko zokusingqongileyo kwendawo, izilwanyana zinokuphila kakuhle okanye hayi, ke ayizizo zonke inzala ezifikelela kwinqanaba labo lokudala.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nolu krebe umhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Ingwe ekrebe
Ezona ntonga zilungileyo zokuloba